Kedu ụzọ ndị nwere ike isi nweta backlinks n'afọ ọzọ?
Onye ọ bụla nke na-arụ ọrụ n'ahịa dijitalụ mara na njikọ njikọ dị oké mkpa maka ihe ịga nke ọma mgbe ọ na-abịa n'ịkwalite ikike weebụsaịtị ma na-ebute ọkwa dị elu na SERP. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite elu na SERP, ị ga-achọkwughachite azụ. A gaghị ahụ àgwà gị na nke zuru okè nke ndị nwere ike ịgụ gị ma ọ bụrụ na ọ nweghị njikọ. Ya mere, nsụgharị backlinks dị mma bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na njikwa njikwa search taa. All isiokwu na posts dị elu nwere ntanetị njikọ sitere na isi mmalite ndị ọzọ na-ezo aka na ha - wohnung i. Njikọ na-abụ akwụkwọ mkpado maka ibe ndị Google weere dị ka ikike. Google lere akwukwo di iche iche anya di iche iche karia akwukwo nke nwere backlinks iri. Otú ọ dị, ọ bụrụ na njikọ ndị a sitere na ebe nrụọrụ weebụ a maara nke a ma ama, ha ga-eri ọtụtụ puku ndị dị n'etiti njikwa njikọta ndị ọzọ.
Anyị na-ebi n'ime ụwa ebe azụmahịa niile chọrọ backlinks. Ndị ahịa na-achọ ha kwa ụbọchị, ọ na-aghọkwa ihe ịma aka ịnọgide na n'elu egwuregwu a. Ọtụtụ ndị ahịa na-akwụsị nanị ụlọ ọrụ ha na-ejikọta ha ka ha weere ya iwe, enweghị isi na enweghị nkwanye ùgwù. Otú ọ dị, ọ bụghị ụzọ isi kwụsị. Iji mekwuo ahia okporo ụzọ, ị ghaghị ịmepụta profaịlụ backlink àgwà. Ya mere, inweghachi backlinks na 2017, 2018 na afọ ndị sochirinụ ga-abụ ihe kachasị mkpa. E nwere ụzọ ụfọdụ a na-apụghị ịgbanwe agbanwe ị nwere ike iji mee ihe na ụlọ ọrụ njikọ gị iji nweta nsonaazụ anya. N'isiokwu a, anyị ga-elebakwu anya na usoro ndị a tinyere ndụmọdụ mkpọsa njikọta nke na-arụ ọrụ maka 2018.
Olee otú iji nweta backlinks na 2018?
Bọọgụ ndị ọbịa
Ịde blọgụ ndị ọbịa bụ ohere magburu onwe ya iji kpụga okporo ụzọ na-echere na saịtị gị. Ọ bụ ụzọ dị mkpa na niche dị iche iche iji mepụta ihe ọṅụṅụ dị mma njikọ. Ọzọkwa, ọ na-enye gị ohere ịkọ onwe gị dịka onye ọkachamara na ụlọ ọrụ na-egosi ndị ọrụ gị ikike.
Nzuzo zuru oke maka idozi njikọta n'ime ụlọ bụ iji mepụta blog maka saịtị gị. Otú ọ dị, ịga na saịtị ndị ọbịa nke nwere ikike dị elu na aha ọma n'etiti ndị ọrụ na-ezipụ okporo ụzọ ị na-enweghị ike ịnweta. N'okpuru onye ọ bụla na-ezitere gị, ị ga-eji omenala na-ede akwụkwọ site na njikọ nke na-ejikọta na saịtị gị. Ọ ga-enyere gị aka dịka nkwalite n'efu ma melite ikike ikike gị. Ị dee nnukwu isiokwu dabere na nyocha na dịka mgbanwe maka ọrụ gị ị nwetara akara azụ bara uru. Ihe niile dị mma, ọ bụghị ya? Ya mere, ihe bụ isi ebumnobi a bụ naanị na onye ọbịa na-eziga elu na saịtị ndị dị elu. Ana m enye ndụmọdụ ka ị ghara ịhapụ ịmepụta isiokwu maka ebe nrụọrụ weebụ spammy dara ogbenye.
Kwuo ndị na-egbu gị na (posts) gị
Amaghị m na i chere okwu ndị metụtara ndị isi ike na ndị na-ahụ maka niche gị. Ha na-etinye aka ma mee ka ndị ọrụ pịa ha. Ihe ndị dị otú a na-enweta ọkwá dị elu n'ime oge dị mkpirikpi ka ha na-enweta ma nwee ụfọdụ ozi nyocha. Ndị na-ebipụta akwụkwọ ndị ahụ na-eme ya maka otu ihe kpatara ya. Ọ ga-amasị ha ịnweta akara azụ ndị ọzọ dị mma site na isiokwu ndị a. Ya mere, mgbe ị na-ekwu banyere ndị a ma ama na isiokwu gị, ị ga-enwerịrị ohere ị ga-ejikọta na saịtị gị. Otu ihe gbakwunyere na ya bụ na uche influencers ị kpọtụrụ aha nwere ike ịkekọrịta isiokwu ndị a na ọtụtụ ụmụazụ ha.